Black Friday: Ny tsara indrindra amin'ny haino aman-jery, gadget ary azo ampiasaina | Gadget News
Black Friday: Ny tsara indrindra amin'ny haino aman-jery, gadget ary azo ampiasaina
Miguel Hernandez | 24/11/2021 10:00 | General, About us
El Zoma Mainty Efa antomotra izao, araka ny fantatra, hankalazaina ny zoma 26 novambra ho avy izao, na izany aza, ny ankamaroan’ny tolotra dia efa hita any amin’ireo toeram-pivarotana lehibe an-tserasera amin’ny fikasana hanamora ny fiantsenana Krismasy ho an’ny mpampiasa rehetra.
Izahay dia mitondra anao ny tolotra tsara indrindra amin'ny gadget, fitaovana azo ampiasaina ary vokatra multimedia mba hahafahanao manararaotra ity Zoma Mainty ity. Fantaro miaraka aminay ny fomba ahafahanao mitahiry betsaka indrindra, ary ny fomba azonao araraotina amin'ny fividianana Krismasy lehibe nefa tsy mila ny carte de crédit ho lasa tezitra.
2 Huawei MateView - Mety amin'ny asa
3 Huawei Watch 3, famantaranandro boribory
4 Amazon Fire HD 10 - Tsara, tsara tarehy ary mora
5 Anker PowerConf C300 hanatsarana ny antso an-dahatsary
6 Kojakoja lalao HyperX amin'ny vidiny midina
7 CS3040 M.2 SSD ho an'ny PS5 sy PC
Manana tontonana LCD IPS miaraka amin'ny coating anti-glare ary lafiny 16: 9 miaraka amin'ny backlighting WLED izay ahafahantsika manararaotra tanteraka ny fanovana manakaiky ny HDR feno. Amin'ny lafiny iray dia manana isika famirapiratana ambony indrindra 300 nits izany no mahatonga antsika haneho mialoha ny mazava. Ho fanampin'ny 60Hz, ahoana raha tsy izany, manana 85% amin'ny fenitra NTSC sy ny 119% amin'ny fenitra sRGB ka mety amin'ny fanitsiana azy ihany koa.
Raha resaka fifandraisana dia manana seranana HDMI 2.0 roa izahay ary seranan-tsambo DisplayPort 1.2 miaraka amin'ny famoahana headphone hybrid 3,5-milimeter. Fanampin'izany, miaraka amin'ny rafitra fanamafisam-peo stereo 3W ampy ho an'ny andro isan'andro. Azonao atao ny mividy izany miaraka amin'ny fihenam-bidy 10% amin'ny Amazon amin'ny 323,90 euros, amin'ny vidiny tsara indrindra ary miaraka amin'ny fandefasana ao anatin'ny iray andro monja. Tolotra mahaliana ho an'ny Black Friday izay ahafahanao mankafy ity fanaraha-maso ity izay arovana amin'ny tontolon'ny asa na amin'ny lalao.
Huawei MateView - Mety amin'ny asa
Huawei MateView dia mpanara-maso izay noho ny endrika, ny endrika ary ny toetrany dia ahafahanao manatsara ny vokatrao amin'ny fomba "premium". Dmanana 28,2 santimetatra izahay amin'ny famaha 4K + (3.840 x 2.560) izay mampifandray ny haitao HDR400, noho io no ampiasainy a Famirapiratan-kevitra 500, ambonin'ny fenitry ny tsena ho an'ity karazana tontonana ity. Manana taham-pahavitrihana "ihany" izahay 60 Hz izay mampahatsiahy antsika fa miatrika monitor iray mifantoka amin'ny famokarana ary ny tahan'ny 1.200: 1 mifanohitra.
Azonao atao izany miaraka amin'ny fihenam-bidy 15% lehibe amin'ny Amazon, ary koa mivantana ao amin'ny Huawei Store.
Eo amin'ny ilany ankavanana dia hahita «HUB» kely lehibe izay hanolotra antsika isika seranana USB-A roa state-of-the-art, seranana DisplayPort USB-C mifanaraka amin'ny famandrihana hatramin'ny 65W ary a jack audio hybrid (mamela ny fidirana sy ny vokatra) an'ny 3,5mm. Na izany aza, tsy ny zava-drehetra sisa tavela eto, ny lamosina dia ho an'ny seranana herinaratra USB-C izay manome hery ny fitaovana hatramin'ny 135W, miaraka amin'ny kilasika Mini DisplayPort sy seranana HDMI 2.0.
Huawei Watch 3, famantaranandro boribory
Ny voalohany amin'ireo fitaovana azo ampiasaina dia ny Huawei's Watch 3 dia ny smartwatch an'i Huawei mandeha voalohany eo ambany Harmony OS 2.0 ny rafitra fiasan'ny marika manokana izay mety hanaisotra ny wearOS an'ny Google noho ny zava-bitany lehibe.
Izy io dia manana sensor lehibe toy ny sensor oksizenina, pulsation, mari-pana ary na dia altimeter aza, izay mahatonga azy ho iray amin'ireo feno indrindra, ankehitriny amin'ny € 279 fotsiny izay fihenam-bidy 90 euros.
Safidy hafa mahaliana sy mora dia ny Huawei Band 6, Tsy azontsika atao ny manantena asa fanampiny avy ao aminy, manana bracelet miisa isa isika izay mamely ny mpifanandrina aminy amin'ny famolavolana sy amin'ny efijery amin'ny vidiny 34,90 euroAmim-pahatsorana, mahatonga ahy hanapaka tanteraka ny fifaninanana rehetra izany.
Amazon Fire HD 10 - Tsara, tsara tarehy ary mora
Mahita takelaka 10,1 santimetatra izahay, fitaovana antonony sy ny vidiny ary ny tolotra mahaliana mikendry indrindra amin'ny fandaniana votoaty, na avy amin'ny sehatra atolotry ny Amazon mihitsy na avy amin'ny mpamatsy ivelany.
Manana processeur valo-fototra somary voafehy amin'ny 2,0 GHz sy 3GB an'ny RAM, miaraka amin'ny fitahirizana anatiny 32 na 64 GB arakaraka ny dikan-teny nofidiana. Fitaovana ho an'ny fotsiny 144,99 euros amin'ity tolotra Black Friday ity Manolotra antsika toetra azo alaina izy io ary mifanaraka amin'ny vidiny.
Anker PowerConf C300 hanatsarana ny antso an-dahatsary
Tsy isalasalana fa raisina ho fitaovana azo antoka ho an'ny fivorian'ny asantsika izy ity noho ny kalitaon'ny mikrôfony sy ny fahaizany manolotra antsika, raha manapa-kevitra ny hifidy amin'ny Anker PowerConf C300 ianao tsy isalasalana fa tsy ho diso ianao, hatreto, ny tsara indrindra efa nanandrana izahay. Raiso amin'ny 79 euros miaraka amin'ny fihenam-bidy 38% amin'ny Amazon.
Azontsika atao ny manitsy zoro fijerena telo amin'ny 78º, 90º ary 115º, ary koa ny fisafidianana ny toetra telo hisamborana 360P sy 1080P, mandalo ny mety hanitsiana ny FPS, mampihetsika sy manafoana ny fifantohana, ny HDR ary a Fiasan'ny Anti-Flicker tena mahaliana, amin'ny alàlan'ny tariby USB-C azy.
Kojakoja lalao HyperX amin'ny vidiny midina
Nanomboka tamin'ny fitendry Hyper X Alloy Core miaraka amin'ny lakile 105 izahay ary lanja avo noho ny fananganana metaly. eFA USB 2.0 ary hafainganam-pandeha 1.000 Hz. Mazava ho azy fa manana rafitra anti-ghosting multi-key izy ary manana fanalahidy manokana ho an'ny fanaraha-maso multimedia, ary koa ny "mode lalao".
Raha ny Pulsefire Core dia manana ny sensor isika Pixart PAW3327 miaraka amina vahaolana 6.200 dpi sy andiana preset misy bokotra ambony 800/1600/2400 sy 3200 dpi arakaraka ny tsiron'ny mpampiasa tsirairay. Ny hafainganam-pandeha dia 220 IPS ary ny hafainganam-pandeha farany ambony dia 30G. Andao hitifitra bokotra 7 feno, izay manome antoka ny androm-piainan'ny tsindry 20 tapitrisa.
CS3040 M.2 SSD ho an'ny PS5 sy PC
Este XLR8 CS3040 dia M.2 NVMe SSD Taranaka faha-XNUMX miaraka amin'ny heatsink miharo be loatra. Atolotra amin'ny karazany telo mitahiry: 500GB, 1TB, ary 2TB. Raha ny momba anay dia manadihady ny kinova 1 TB izahay ary tsy maintsy milaza fa nanome valiny tsara izany.
Izany rehetra izany dia manome antsika amin'ny taratasy hatramin'ny 5.600 MB / s amin'ny fahombiazan'ny famakiana, ary hatramin'ny 4.300 MB / s amin'ny fahombiazan'ny fanoratana. Amin'ireo andrana ataonay, araka ny hitanao amin'ny horonantsary nitarika ity famerenana ity, nihoatra ny sakan'ny hafainganam-pandeha novakiana izahay, ary nihaona ny hafainganam-pandehanay.
Ny vidiny dia miaraka amin'ny fihenam-bidy 36% amin'ny Amazon ho an'ny dikan-teny 500 GB ary mijanona amin'ny 96 euros fotsiny, tolotra tsy azo lavina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Black Friday: Ny tsara indrindra amin'ny haino aman-jery, gadget ary azo ampiasaina
Dreame L10 Pro: famerenana, vidiny ary endri-javatra